Soo dejisan BBC News 3.7.1.9 – Vessoft
Soo dejisan BBC News
BBC News – software ah si aad u eegto Wararkii Ugu Danbeeyay iyo dhacdooyinka dunida oo dhan. Software wuxuu bixiyaa tiro balaadhan oo ah qaybaha warka, ay ka mid yihiin ciyaaraha, ganacsiga, technology, caafimaadka, madadaalada iwm BBC News kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto sheekooyinka adiga kuu gaar ah iyo duntu video suxufiyiinta daabacaada. Software waxay bixisaa ayna ugu dhowaad news dhabta ah sida ay shakhsi ahaaneed. BBC News ku jira maqaallo badan oo macluumaad ku saabsan dhacdooyinka dhinacyo kala duwan oo nolosha la qalabeeyay la meelo sawir ku haboon loo habeeyey si ay shaashadda ka mid ah qalabka.
News xiiso ka soo adduunka oo wariyayaasha
Liiska badan oo qaybaha warka
Joogitaanka wax audio iyo video ah
Shaqsinimo ee jaqaan warka
BBC News Software la xiriira: